Ziningi izindlela ukuze uthumele ulwazi emkhathini. Ngokwesibonelo,
thumela incwadi evela eMoscow New York, yezimanga ngeposi noma nge-Internet noma ngokusebenzisa amaza omsakazo. Futhi umuntu e-New York ungabhala incwadi impendulo bese uthumela ku Moscow yinoma yimuphi Kulezi zindlela ezingenhla.
Isimo siba esihlukile nokudluliswa isikhathi irformatsii. Ngokwesibonelo, ngo-2010,
It liyadingeka ukuze uthumele incwadi evela eMoscow New York, kodwa ukuze le ncwadi ayengakwenza
Funda eNew York ngo-2110. kanjani lokhu? futhi indlela
Abantu ababeka wayifunda le ncwadi 2110 uzokwazi phambili impendulo
incwadi eMoscow ngo-2010? izixazululo kungenzeka lolu hlobo imibuzo uzonikezwa kule ephepheni.
1. inkinga eqondile yokudlulisa ulwazi ngokuhamba kwesikhathi
Okokuqala, cabanga ngelithi izindlela ukuxazulula isikhathi ulwazi ukudluliswa izinkinga ngqo (zangesikhathi esidlule ukuba esikhathini esizayo). Ngokwesibonelo, ngo-2010 isidingo ukuthumela incwadi evela eMoscow New York, kodwa ukuze incwadi zingatholakala eNew York ngo-2110. kanjani lokhu? Indlela elula yokuxazulula lolu hlobo nkinga kahle aziwayo isikhathi eside - ukusetshenziswa real idatha abathwali (iphepha, isikhumba, izibhebhe zobumba). Ngakho, indlela yokudlulisa idatha eNew York ngo-2110 kungenzeka, isibonelo, lokhu: Kumelwe ubhale incwadi eya ephepheni, thumela ngokucela imeyili incwadi ezigcinwe archive New York kuze 2110, bese ufunda lawo ubani le ncwadi senzelwe. Nokho, leli phephandaba - akusiwona umgcini onensika kakhulu, kuba ekuthonyweni namachibi kanye eside sokusebenza yayo lilinganiselwe, kakhulu, ambalwa iminyaka engamakhulu. Ukuze ukudlulisa ulwazi eminyakeni eyinkulungwane ngaphambi kungadinga ezibhebheni zobumba eside, futhi ngezikhathi izigidi zeminyaka - kusukela ipuleti nizkookislyaemyh futhi ephezulu amandla metal Alloys. Ngandlela-thile, kodwa, isimiso, udaba lokwedlulisela lolwazi zangesikhathi esidlule ukuba ikusasa lesintu wanquma kudala. Incwadi ezivamile - lokhu kuyindlela ukuthumela ukwaziswa enzalweni.
2. Inkinga ephambene yokudlulisa ulwazi ngokuhamba kwesikhathi
Manje cabanga izindlela ukuxazulula isikhathi izinkinga yokudlulisa ulwazi ephambene (kusukela esikhathini esizayo ku esidlule). Ngokwesibonelo, ngo-2010 indoda Incwadi ithunyelwe kusuka eMoscow kuya New York bese efakwa ifayela eNew York eyikhulu. Kanjani umuntu B, abayoba wayifunda le ncwadi 2110 uzokwazi phambili incwadi ephendula eMoscow ngo-2010? Ngamanye amazwi, indlela umuntu A, owabhala le ncwadi, kungenzeka uthole impendulo evela ku 2110?
Uma uthi nhlá, umsebenzi umsindo kumnandi. Ngokombono indoda elula emgwaqweni,
kokuthola ulwazi Ngokuzayo asisebenzanga. Kodwa ngokuvumelana imibono physics theory akunjalo. Nasi isibonelo esilula.
Cabanga irherho le-closed amaphuzu n impahla ngokombono Mechanics classical. Ake sithi nezikhundla velocities of iphuzu ngalinye kulawa ngesikhathi. Khona-ke, ekuxazululeni Lagrange zibalo (Hamilton) (), singakwazi ukuthola izixhumanisi kanye velocities zonke lezi amaphuzu nganoma isiphi esinye isikhathi. Ngamanye amazwi, ukusebenzisa zibalo ka Mechanics classical ukuze irherho le-closed lezinto mechanical, singakwazi ukuthola ulwazi kusuka esizayo ngesimo uhlelo.
Esinye isibonelo: cabanga ukuziphatha i-electron ensimini umile we-athomu nucleus amabutho Luhambo ngokoMthetho imiqondo-quantum-mechanical
Schrödinger-Heisenberg (). Siphinde lokucabanga ukuthi ithonya emikhakheni ehlukahlukene zangaphandle kungenziwa indiva. Ukwazi electron wave umsebenzi esikhathini esithile isikhathi kanye nokungaba emkhakheni nucleus yama-athomu ingabalwa inikezwe umsebenzi wave nganoma isiphi esinye isikhathi. Ngakho kungenzeka ukuba abale ematfuba ekutholeni electron weyesi inikezwe emkhathini ngasiphi ngesikhathi esinikeziwe. Ngamanye amazwi, singakwazi ukuthola ulwazi kusuka ikusasa isimo electron.
Nokho, nawu umbuzo: uma imithetho kokubili physics zakudala quantum usitshele ukuthi kokuthola ulwazi esizayo kungaba kungani ingakamiswa kwenziwe ku umkhuba ekuphileni kwansuku zonke? Yingakho kungekho muntu emhlabeni uye wathola izincwadi ezingaphezu enzalweni yabo elikude, ebhaliwe, isibonelo, 2110?
Impendulo itholakala phezu. Futhi endabeni kwesimiso amaphuzu impahla, futhi esimweni i-electron emkhakheni nucleus yama-athomu, siye sahlola ukuziphatha izinhlelo avaliwe, okusho izinhlelo ezinjalo, ithonya amabutho angaphandle, okungase dengwane. Umuntu akasona irherho le-closed, ke ngenkuthalo kushintshe izinto namandla nge imvelo.
Ngakho, siba nesimo isixazululo ephambene inkinga yokudlulisela idatha ngokuhamba kwesikhathi:
Ukuze ukudluliswa kolwazi ngesikhathi ngaphakathi subsystem evulekile
ngokunemba eyanele oludingekayo ukuze siphenye ukuziphatha ubuncane kungenzeka irherho le-closed oqukethe subsystem inikezwe.
Ngokusobala, isintu njengoba iqoqo subsystems evulekile (abantu), i-ephansi okunokwenzeka irherho le-closed kuyinto emhlabeni jikelele
atmosferoy.Takuyu uhlelo Uyobiza PZSZ (noma eduze ivaliwe
Umhlaba System). Igama elithi "eseduze" lisetshenziswa lapha ngokuqondene yokuthi kusobala ukuthi ncamashi sootvetstvyuschih opredeleniyayu theory ivaliwe izinhlelo abekho (). Ngakho, ukuze ukubikezela ukuziphatha oyedwa esikhathini esizayo, kubalulekile ukufunda futhi zibikezela ukuziphatha ingqikithi zonke izingxenye iplanethi enguMhlaba nomkhathi wawo. Ngaphezu kwalokho, ukucacisa ngawo kubalulekile ukwenza iimbalo zibe ezifanele kufanele kungabi ngaphansi kuka usayizi cell. Yebo, ngaphambi kokuba ubhala incwadi, Umuntu kufanele ucabange ngalokho ngokuncomekayo ukubhala lencwadi eya. Imicabango zenzeka ngo ukudluliselwa amaza kagesi phakathi izinzwa ebuchosheni. Ngakho-ke, ukuze ukubikezela ngemicabango yomuntu, kubalulekile ukuba ukubikezela ukuziphatha wonke amangqamuzana ebuchosheni abantu. Siyakuqonda esiphethweni sokuthi nokunemba kubalulekile ukwazi idatha lokuqala PZSZ kuzidlula ukunemba kwanoma yiziphi amadivaysi wokulinganisa yesimanje.
Nokho, ukuthuthukiswa nanotechnology, kunethemba lokuthi amadivaysi ukunemba kudingekile bungatholakala. Ukuze wenze lokhu, kufanele 'axazulule "Umhlaba nanorobots. Okungukuthi, kuzo zonke ingxenye PZSZ, engaqhathaniswa usayizi ubukhulu amaseli, (sikubiza nanocombs) kumele ibekwe nanobot okufanele ukukala nemingcele nanocombs nokudlulisa nabo kukhompyutha enamandla (ake ukuyibiza nanoserverom). Nanoserver kufanele ukusingatha ulwazi kuzo zonke nanorobots PZSZ bese isithombe esinobunye ukuziphatha PZSZ ezidingekayo ukuze adlulisele ulwazi ngesikhathi ukunemba. Ukuqoqwa zonke nano-amarobhothi, "bazinza" ukuze Umhlaba nomkhathi kuyothiwa iseli nanoefirom. Kulokhu bonke ukwakhiwa ngenhla echazwe ehlanganisa nanoefira futhi nanoservera ezihambisana ngokuthi TPIV PZSZ (noma isikhathi ulwazi transmission technology esekelwe eseduze a sitemy avaliwe Earth). Ngokuvamile, lolu hlobo ubuchwepheshe zidinga ukuthi wonke amangqamuzana emzimbeni womuntu kwaba nanobot. Nokho, uma usayizi nano-amarobhothi ngeke nichtochno encane kuqhathaniswa ubukhulu cell ke umuntu ngeke uzizwe khona nanobots emzimbeni.
Ngakho, nakuba Namuhla e masshtabahah zezimboni kungenzeki ukuxazulula inkinga ephambene yokudlulisa ulwazi ngokuhamba kwesikhathi, esikhathini esizayo, ukuthuthukiswa
nanotechnology, lokhu kungenzeka zivele.
Esikhathini ingxoxo okwalandela, TPIV eside sizofaka kubo bonke ubuchwepheshe siye kuchaziwe esigabeni 1 no-2.
3. Ukuxhumana ulwazi ukudluliswa isikhathi yokudlulisa ulwazi esikhaleni.
Kufanele kuqashelwe ukuthi i-Earth lukhipha amandla ngesimo amaza okushisa emkhathini futhi ithola amandla ngesimo ukukhanya okuvela elangeni nezinkanyezi. isikhala Energy exchange kwenzeka nezindlela ezithandeka okwengeziwe, isibonelo emkhathini iwe Emhlabeni.
Indlela PZSZ efanelekayo ukudluliselwa esisebenzayo kolwazi ngokuhamba kwesikhathi, kufanele sibonise ucwaningo esizayo emkhakheni nanotechnology kanye nanoefira. It alikwenqabeli ukuphuza kungenzeka ukuthi emisebeni yelanga kuyoba nesandla iphutha kwezinga izindlela nokuhlaziya PZSZ nanoefirom nakutlhogeka lonke ststemu solar, kanjalo eqaphela TID PZSS ubuchwepheshe (noma ubuchwepheshe yokudlulisela ulwazi esekelwe isikhathi cishe a avaliwe ilanga sitemy). Kulokhu, kungenzeka ukuthi le kwabantu isilinganiso e PZSS nanoefira kungase kube kuncane kunokwabanye kwabantu nanoefira Emhlabeni. Kodwa PZSS ngeke ukushintshanisa amandla nge imvelo, isibonelo, ne izinkanyezi eliseduze. Kule ndaba kuba nokucabanga osobala ukuthi esisebenzayo yokudlulisela isikhathi kolwazi oyokwenziwa nge ukuphazamiseka okuthile.
Ngaphezu kwalokho, iphutha elihlobene ne evulekile izinhlelo real can
kakhulu ukwandisa isici womuntu. Ake sithi zaphumelela ukufaka ngesinyelela PZSZ TPIV based. Kodwa isintu ukuqalisa eside mkhathi ngale emkhathini woMhlaba, isibonelo, ukuhlola inyanga, i-Mars,
UJupiter kwamanye amaplanethi satellites. Lezi mkhathi umklomelo
amasignali nge emhlabeni, ngaleyo ndlela iphazamisa zamkknutost PZSZ. Ngaphezu kwalokho, amasignali kagesi equkethe ulwazi kubonakala kakhulu khulu ehlaselwe kokunikezwa kwe-Ukuvalwa kunokukhanya okuvela ezinkanyezini oqhubeka mthwalo ulwazi, ngakho-ke, hhayi umthelela kangaka ukuziphatha kwabantu. PZSZ futhi PZSS - izimo ezikhethekile priblzhennyh kumasistimu avaliwe lezinto (PZSO). Ngakho, singaphetha ngokuthi, ikakhulukazi ngenxa yokudlulisela eliphezulu kolwazi ngokuhamba kwesikhathi ngaphakathi PZSO ezidingekayo ukuze kukhawulwe esiphezulu amasignali kungenzeka Ukwaziswa wengxoxo phakathi nezwe futhi PZSO.
Ngaphandle inani ukuphazamiseka okubangelwa akuphelele amahloni izinhlelo Okuyınqo, amasosha omzimba TPIV uzophinde zimisele ivolumu PZSO. Lapho Ubukhulu ngekwendzawo PZSO, kancane umsindo amasosha omzimba kuyodingeka TPIV. Ngempela, nanorobot ngamunye batawedlulisela isibonakaliso nanoserver ngephutha ukuthi izinsiza ezincike ngokukhethekile phezu instrumentation amaphutha nanorobot. Ngokuvamile, uma sicubungula idatha ku nanoservere, amaphutha kuzo zonke nanorobotov uzobe kwakhiwa, kanjalo sinciphise TPIV umsindo amasosha omzimba.
Ngaphezu kwalokho, kukhona esinye isici esibalulekile ukugxambukela LOMLILO - iyona sokungena ukujula ngokuhamba kwesikhathi. Ngezinye ngokuningiliziwe walokhu kuphazamisa isici enkulu. Cabanga sekushiwo isibonelo uhlelo, kuncike imithetho Mechanics classical. Ngokuvamile, ukuthola izixhumanisi kanye velocities amaphuzu nganoma yisiphi isikhathi, kudingeka ukubhekana (isib anda (, )) Lagrange umehluko kwesibalo (Hamilton). Kusobala ukuthi ngamunye isikhathi isinyathelo ezilinganiselwe-umehluko algorithm, iphutha izixazululo ayisungula kunomsindo idatha kokuqala, iyoba ephawulekayo. Ekugcineni, ngesikhathi esithile, umsindo ngeke idlule oyifunayo isignali ezingeni futhi algorithm ayohlakazeka. Ngakho, singaphetha ngokuthi lo elincane ngezikhawu isikhathi ukunemba isikhathi sokudlulisa ulwazi buzoba buncane kunokuba kuqhathaniswa eside zinkathi. Ngaphezu kwalokho, aba maningi kunomsindo idatha kokuqala, ezincane isikhathi ukujula, singakufinyelela. A kunomsindo idatha kokuqala encike ngqo kwi amaphutha okubangelwa kokunikezwa kwe-Ukuvalwa kanye ezilinganiselwe ivolumu PZSO. Ngakho-ke, singaphetha ngokuthini:
Umkhawulo kungenzeka ibanga ukudluliswa amasignali Imininingwane ngesikhathi nendawo kuthiwa kuhlobene ngumthetho ephambene propotsionalnosti.
Ngempela, aba maningi isignali ngesikhathi ukunikeza TPIV edingekayo, ezincane kanye kancane amandla exchange (nge imvelo bangaphandle) Ukungena ukujula kumele ibhekelele PZSO. Sibhala le nkulumo ubuhlobo zezibalo:
lapho dx - ibanga kusuka enkabeni mass isikhala iphuzu PZSO phakathi lapho futhi maphakathi Imininingwane mass kushintshwa. DT - Ukungena isiginali Imininingwane ngesikhathi ukujula, f - njalo, akancikile dx futhi DT.
Njalo ukuzimela f kusuka yimiphi imingcele esingokwenyama yezinto. Ngaphezu kwalokho, ukubaluleka ngqo lokhu njalo is * futhi umsebenzi eyaziwa for ucwaningo esizayo nanoefirom. Qaphela futhi ukufana kwamazwi emaphethini okungu eyaziwayo quantum physics Heisenberg ( kanye no- ), lapho ohlangothini lwesokudla iyona njalo Planck.
4. Abanye ukwaziswa okungokomlando kanye nezindlela zokuchaza
Ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili idaliwe ukuthumela idatha ubuchwepheshe
3D isikhala ngezimpawu kagesi. asathuthuka lokhu
ubuchwepheshe kanyekanye futhi ngokuzimela wahlanganyela eziningi
Ososayensi ngesikhathi (Popov, Marconi, Tesla kanye nabanye.). Nokho, inzuzo umsakazo Marconi igcwaliseke. Ekupheleni kwekhulu le-nesishiyagalolunye angi Marconi, Tesla (nge Edison), ephethwe ukudala kagesi amandla transmission technology ibanga elide ku-metal izintambo. Ngemva kwalokho Tesla wazama ukudlulisela kokubili idatha namandla, kodwa ngaphandle kwentambo. A Marconi ungazibekela umgomo nesizotha more: ukuthi abelane ngolwazi nge nezindleko ubuncane amandla le njongo.
Ngemva impumelelo ucwaningo Marconi sika Tesla abangu iphele ngenxa yokuthi,
ukuthi ukusakaza kwakwanele izidingo yezimboni isikhathi.
Ngakho, endabeni exchange kolwazi pronstranstve, sinalo izindlela okungenani ezimbili bahluke: sidlulisela ukwaziswa kuphela
minimalnymi nge izindleko energy (Marconi indlela) futhi ukudluliswa kolwazi njengoba
futhi amandla esikhaleni (Tesla indlela). Njengoba umlando usubonise, Marconi indlela wazibonakalisa okusebenzayo futhi liye laba isisekelo yentuthuko kwezesayensi lobuchwepheshe
e kwekhulu lamashumi amabili. Kule ndlela, Tesla Nokho, futhi wathola isicelo ofaneleyo zobunjiniyela (AC), ngomqondo ephelele engenantambo isiqinisekiso esiwusizo sokuba nezinto eziqondile yakhe Awukatholi iyiphi okudayiswayo noma Ucwaningo.
Uma TPIV isimo qualitatively okufanayo. Umcabango isikhathi sokuhamba, okuyinto lungatholakala eqanjiwe, ngokuvamile elihambisana indlela yesibili, ethi indlela Tesla, ngaphansi displacements yesikhashana emizimbeni yamangqamuzana, noma ngamanye amazwi, nokudlulisela amandla ngokuhamba kwesikhathi. indlela Tesla sika namanje abakwazi ukufaka loluhlelo ngokuphelele practice iminyakazo noma ngekwendzawo noma okwesikhashana, futhi mhlawumbe ize uzohlala kuphela kuwukuzikhohlisa umcabango abalobi yesayensi.
Kulokhu, ukudluliswa kolwazi ngokuhamba kwesikhathi, ngaphandle abalulekile yokudlulisa amandla, - indlela kachestvennno kuqala ukuthi abelane ngolwazi, obuvumelana izimiso Marconi. Ngokwengxenye TPIV bakwenze esikhathini sethu (bheka paras. 1 no-2), futhi kukhona ithemba ukuthi ubuchwepheshe egcwele idatha izokwakhiwa esikhathini esizayo.
Ngokokuqala ngqá, isiphakamiso ukusebenzisa Marconi indlela kungenzeka ukudluliswa kolwazi ngokuhamba kwesikhathi, kwasikiselwa sezibalo uLidiya Fedorenko ngo-2000. Ukuguga nempilo ebuthaka akazange amvumele intesivnost uqhubeke nocwaningo kule siqondiso. Nokho, wakwazi ukwakha isitatimende exchange of ulwazi space kanye nesikhathi, okuyinto, ngombono wami, angabizwa ngokuthi isimiso Marconi Fedorenko:
Esikhaleni esigcwele continuum (bheka , ) noma ukudluliselwa amandla kusala engenakwenzeka noma kudinga base kakhulu ezingcono zobuchwepheshe kuka ukudluliswa kolwazi.
Lesi simiso ngokuphelele ezisekelwe emaqinisweni zokuhlola. Ngempela, isibonelo, athwale izingodo aye nazo ukulawula lihamba nge amaza omsakazo amandla kakhulu esingaphansi ukuletha rover ukuze Iplanethi Ebomvu. Esinye isibonelo, uma umuntu A, ohlala eMoscow, ufuna ukukhuluma indoda e abahlala New York, uyindoda Futhi-ke kulula kakhulu ukwenza ocingweni, kunokuba ukuchitha isikhathi esiningi namandla uthuthukisa indiza ngaphesheya kwe-Atlantic. Marconi umsakazo ukuziqambela futhi siqondiswe yilo isimiso, ngokuthumela amasignali kagesi ngu kuphela ulwazi ungagcina kakhulu amandla. Ngaphezu kwalokho, ngokuvumelana nesimiso Marconi Fedorenko ayikwazi ngaphandle ukuthi kungenzeka ukuthi kwezinye izimo nokudluliswa kwamandla esikhaleni esigcwele continuum ngokuyisisekelo engenakwenzeka. Khona kwanoma isiphi amandla ezihambayo amaqiniso zokuhlola (isb, emizimbeni yamangqamuzana) emuva ngesikhathi (isib kusukela isipho esidlule) ubonisa ngokucacile ukuthi akhona kusizakale zokusebenzisa lesi simiso.
Kulesi sihloko singathanda ukwazi ukuthi ngesikhathi ukudluliswa kolwazi (TPIV) - lokhu akulona eqanjiwe, kungcono technology real, okuyinto ngokwengxenye ezikhona namuhla ukuthi njalo ngcono, futhi kungase ukufinyelela ukusetshenziswa walo omkhulu esisebenzayo esikhathini esizayo esiseduze. Ngokusekelwe kulezi ubuchwepheshe kuyoba ukuba wabelane ngolwazi nabantu kokubili esikhathini esidlule kanye kusukela esikhathini esizayo.
Ngizothanda futhi ukuba uqaphele ukuthi izimiso TPIV kuhluke kakhulu
izindlela zokufunda i-theory kanye yobuchwepheshe Tesla (ie, lezo zindlela ukuze isikhathi sokuhamba ezingaba lithathwe eqanjiwe nokuthi kuwukuhlakanipha ukuphetha ngokuthi "ubuchwepheshe" lokudluliselwa amandla ngesikhathi (TPEV)).
Nokho TPIV TPEV futhi ngaphandle ngendlela efanayo ngemibono:
isifiso sabantu ukuxhumana kokubili ngokusebenzisa isikhala bese ngokusebenzisa isikhathi. Ngakho-ke, kunengqondo ukuphetha ukuboleka itheminoloji TPEV isetshenziswa TPIV hardware ohlangothini. Esigabeni esilandelayo kwethulwa sizozama ukucacisa kusukela iphuzu Ngenxa TPIV kuyinto analogue processing kudivayisi main
TPEV, okungukuthi, umshini isikhathi.
5. Abanye Ukucaciswa TPIV
Ngo yesayensi zingatholakala ezinguqulweni ezihlukahlukene incazelo umshini sedivayisi lobuchwepheshe ngawo umuntu angasenza isikhathi sokuhamba. Le divayisi ngokuthi umshini isikhathi. Ngokombono walaba ephelele analog TPIV kule divayisi akunakwenzeka, ngoba isikhala ayihambi amandla (hhayi emizimbeni yamangqamuzana), kodwa kuphela ulwazi (amasignali imininingwane). Nokho, ukuze ube nethuba TPIV apharathasi, okuyinto in ukusebenza yayo eziyisisekelo cishe ukufanisa umshini isikhathi. Le yunithi kuyothiwa umshini isikhathi, eziphathelene TPIV noma, e indlela efingqiwe yokubhala igama, MVTPIV.
Ngakho, chaza izimiso eziyisisekelo MVTPIV. Ingxenye okufanele sihambe naso sisobala, kanjalo MVTPIV izosebenza. Isisekelo ukudluliselwa amasignali ngokusebenzisa MVTPIV uyokhonza nanoefir ngokugcwalisa BPC. Lezi zimpawu Sizocubungula futhi udlulise ngesikhathi nanoserver MVTPIV. Ake sithi owesilisa abahlala 2015 liyadingeka ukuthatha umyalezo ovela umuntu ukuphila 2115. Yena buthola kudatha womuntu MVTPIV Management Console (isibonelo, i-passport yakhe noma okunye), futhi uthumela isicelo ukuze nanoserver. A Nanoserver izibambo isicelo yomsebenzisi, ihlola ngabe umuntu likhona e 2115, uma kuye kwadingeka yimuphi umyalezo Indoda kuthunyelwe 2015. Phezu ukuthola sotvetstvuet imiyalezo nanoserver ubathumela kuya A. umsebenzisi MVTPIV Uma umuntu A uyazi idatha umuntu B ke kungaba nje ubheke isicelo iseva, akazange abashiye ubani ngaye imilayezo evela esizayo. Ngokufanayo, uma umsebenzisi A liyadingeka ukuze uthumele umlayezo ku-umsebenzisi eminyakeni eyikhulu ngaphambi, ke buthola phezu MVTPIV console lo mlayezo futhi ithumela yona nanoserver. Nanoserver ezitolo lo mlayezo eyikhulu, sihamba ku-Note umuntu B. ukuthi isikhathi ukudluliswa phambili ulwazi (kusuka A kuya B) zisebenzisa nanoservera ozikhethela, futhi yanele le njongo ukusebenzisa ezivamile inkumbulo idivayisi ekwazi ukugcina idatha kuze eyikhulu (bheka para. 1). Phawula futhi ukuthi ngenxa nanoservera futhi MVTPIV angasebenzisa amasignali omsakazo. Ngakho, nezobuchwepheshe MVTPIV kuyoba idivayisi iselula efanayo ngokuphelele noma umsakazo. Ngaphezu kwalokho, kunoma iyiphi ifoni evamile eziningi zalezi zinsuku mobile isebenze njengophawu MVTPIV. Kodwa lokhu akumelwe ukuthola amasignali omsakazo kusuka kusayithi cell, futhi kusukela nanoservera. Nokho, isikhathi nontrivial zonke ubuchwepheshe ngenhla reverse idatha ukudluliswa ngokuhamba kwesikhathi (kusukela B A), lapho kakade kudingekile ukusebenzisa nanoefir.
Ngakho, kunethemba lokuthi bakwazi ukuxhumana nabanye, njengoba nje esikhathini sethu, abantu bakhuluma omunye komunye kuselula esikhathini esizayo, ne nokuthuthukisa ithekhnoloji, abantu ababili, ahlukaniswe isikhawu sesikhathi ngokuhlola kweminyaka eyikhulu noma ngaphezulu.
6. Olungokoqobo ukusetshenziswa TPIV.
isithakazelo komlobi udaba yokudala umshini isikhathi ngenxa yezizathu eziningana, kodwa owayevelele kubo ukutadisha le ndaba yokungaziphathi nokuvuswa kwabantu sebefile. Umbhali kule ndaba okuphishekelwayo hhayi inzalo kuphela yesayensi ezingokoqobo, kodwa futhi isibopho somuntu siqu ukuze ngivuselele ugogo wakhe, isazi sezibalo sefilosofi, uLidiya Fedorenko. Umbuzo zabantu uvuko manje kabanzi kudalulwe kuphela izincwadi zenkolo, futhi kumnandi emhlabeni yesayensi ngale ndaba ubuswa zokungabaza ngaphezulu.
Nokho, ubuchwepheshe obufana unike amandla TPIV ukunikeza abanye ithemba nezihlobo zomufi kungenzeka ukuvuswa kwabathandekayo babo esikhathini esizayo esiseduze. Iqiniso lokuthi, ngemcondvo, nanoserver, okwenza izibalo zabo ngesikhathi reverse (, ) (t. E. Echaza esidlule idatha kokuqala), kungaba kahle impela ukubuyisela isakhiwo wonke amangqamuzana sazo zonke izinto eziphilayo e PZSZ, kuhlanganise amangqamuzana obuchopho futhi noma yimuphi umuntu owake waphila. Lokhu kusho ukuthi usebenzisa TPIV PZSZ based Ungayibuyisa ulwazi oluqukethwe ubuchopho bomuntu nganoma isiphi isikhathi esisodwa esikhathini esidlule. Ukukhuluma ngolimi yansuku zonke, kungenzeka lokuphinda umphefumulo womuntu bese ekhiphela kube nanoserver. Kungenziwa efanayo elibuyiselwe DNA amangqamuzana omuntu. Ngakho, uthole yonke imininingwane engenhla kusukela esikhathini esidlule, kungenzeka clone DNA umzimba komuntu oshonile nalokho Ziphampa emuva umphefumulo wakhe nanoservera, ngaleyo ndlela egcwalisa voskoeshenie egcwele.
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi esikhathini esizayo lapho MVTPIV ngeke ukhokhe ngaphezu umakhalekhukhwini njalo, ukuvuswa ubuchwepheshe abantu cishe khulula. Kubonakala sengathi e emashumini eminyaka ambalwa kuphela zomthetho isithiyo uvuko, ezifana Yuliya Tsezarya futhi Louis XVI umbuzo zomthetho kuphela (ukungabi khona incwadi yelifa ebhaliwe oshonile benesifiso bavuke). izithiyo Technical ukuvuseleleka yimuphi umuntu efile phambi, cishe, ngeke. Ngakho, ngokwale ndlela umbhali, ngesikhathi samanje, kubalulekile ukwakha izinhlangano zomphakathi ezokwenza ukuqoqa nokugcina ethanda eqinisekisiwe ngokomthetho zezakhamizi, ukuze bonke abafisa avuke esikhathini esizayo, ungayenta ngokomthetho.
Kuleli phephandaba izici theory, lobuchwepheshe futhi ezingokoqobo ukudluliswa ngesikhathi, ubuchwepheshe, ulwazi nobuchwepheshe, nesuka endulo, ngenkuthalo asathuthuka zenzeka ekhulwini lamashumi amabili, futhi, ngokusobala, uyofinyelela Selilonke e emashumini ambalwa eminyaka ezayo. Nokho, manje imininingwane lobu buchwepheshe kudinga okutadisha. Ngokwesibonelo, akucaci Inani lamanje le f njalo isilinganiso isikhala-time ukungaqiniseki (1). Ngaphezu kwalokho, isilinganiso kudinga ukuhlolwa zokuhlola uqobo. (Phawula ukuthi ukuhlolwa efanayo, ngokusobala, kungenziwa anda nokuqalisa manje, usebenzisa ubuchwepheshe bama-computer anamuhla.) Libuye iphutha izilinganiso (umsindo) ephathelene ne-ukuphambuka kusuka Ukuvalwa kwazo zonke izinhlangano empeleni ekhona ifoni (kuhlanganise PZSZ futhi PZSS) edingekayo plonost nanoefira edingekayo izici nanoservera futhi t. d.
Ezinye izinkinga ezikhona kulo mkhakha zingaxazululwa kakade (ikakhulukazi esebenzisa zezinombolo ikhompyutha ukumbumbuluzwa). Kukhona iqembu elithile izinkinga ezidinga ezingeni ezinkulu nakakhulu ukuthuthukiswa nanotechnologies kunathi okwamanje. Nokho, asikwazi ngempela kugcwale umlomo ukuthi zonke lezi zinkinga angabacwasi ngokushesha, emashumini eminyaka ambalwa alandelayo. Umbhali ihlela ukuqhubeka nocwaningo yayo theory ne practical kulesi siqondiso. Imibuzo nokusikisela, sicela uthumele ekhelini le-imeyili: danief@yanex.ru.
1. Born M .. theory ka-Einstein ye kwezinto. - M: Mir, 1972..
2. Blagovestchenskii NJENGOBA, Fedorenko DA ephambene inkinga ka acoustic wave esiphelweni esakhiweni ababuthakathaka inhomogeneity lateral. Ekuqhubeni lenkomfa International "Izinsuku ku umumo womsebenzi". 2006.
3. Vasilyev. I zibalo physics zezibalo. - M: Nauka, 1981..
4. Kalinkin. izindlela lenombolo. - M: Nauka, 1978..
5. Courant R., Gilbert D .. Izindlela Mathematical Physics e 2 amavolumu. - M: FIZMATLIT, 1933/1945..
6. Landau L. D. Lifshitz, EM physics theory imiqulu 10. - M: Isayensi, 1969/1989..
7. Saveliev. Jikelele Physics Course 3 amavolumu. - M: Nauka, 1982..
8. Smirnov VI .. Ephakeme Mathematics Course imiqulu 5. - M: Nauka, 1974..
9. Fedorenko DA, Blagoveschenskiy A. S., BM Kashtan, Mulder W. inkinga ephambene ngokuba kwesibalo acoustic. Ekuqhubeni International knferentsii "Izinkinga Geospace". 2008.
Martini ingilazi futhi cocktail kwezindlu kusekelwe kuyo